Robert Townsend wuxuu dib u eegay mustaqbalkiisa masraxa Berkeley - dadka - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Pioneer Robert Townsend wuxuu dib ugu eegay mustaqbalkiisa marxaladda Berkeley - dadka
Pioneer Robert Townsend wuxuu dib ugu eegay mustaqbalkiisa marxaladda Berkeley - dadka
Jilaaga iyo filim sameeyaha Robert Townsend waxaa loo isticmaalay inuu shax u maro wadadiisa gaarka ah ee madadaalada. Wuxuu hadda sheekada la wadaagayaa dhagaystayaasha Bay Area muusiggiisa cusub ee 'The Shuffle' ee Marsh Berkeley, oo ay iska kaashadeen shirkadda Marsh The Pillar ee Don Reed.
Markaad iskudayeyso markii ugu horeysay si ay nolol usameyso Hollywood, mid ka mid ah doorarkii ugu horeeyey ee Townsend wuxuu kujiray riwaayaddii 1984 "Sheeko Askari".
Robert Townsend wuxuu ku ciyaaraa sawirka ganacsiga ee "A Soldier's Story", doorkiisii ​​ugu horreeyay ee filim weyn. (Daniel Baumer / Marsh-ka)
Waxay ahayd Denzel Washington, Howard Rollins iyo Adolph Caesar. Waxaa nalagu magacaabay afar Oscars, oo ay kujiraan Sawirka ugu Fiican, ”ayuu yiri Townsend. "Waxaan u tegey inaan u sheego wakiilkeyga, 'Taasi waa waxa aan ka hadlayo! Waxaan rabaa inaan sameeyo filimo badan sida kan oo kale. Wuxuu yidhi, Robert, waxay kaliya sameeyaan hal filim madow sanadkii. Kaliya waad sameysay. Farxad. Waxay ahayd sida, Yaa! Meeshii aan ka caban lahaa, waxaan is idhi, Waxaan doonayaa inaan filim sameeyo. "
1987, Townsend waxay abuurtay "Hollywood Shuffle", bandhig ganacsi oo soo jiidasho leh oo ku saabsan doorarka jilicsan ee jilicsan ee ay heli karaan jilayaasha madow.
"Markii ugu horreeysay ee aan garto waxay ahayd Hollywood Shuffle," ayuu yidhi. "Waxaan iskaashi la sameeyay Keenen Ivory Wayans, waan gartay, waxaan ku ciyaarayaa filimka, waan soo saaraa, waxaan ahay maalgashada kaliya, waxaan ahay farshaxanleyda, waxaan ahay darawal baabuurta xamuulka ah sidoo kale waxaan ahay daryeelaha. Waxaan idhi, "Waxaan rabaa inaan filim toos ah u hagaajiyo," ayuu Keenan u ekaa, "Rob, weligaa ma aadin dugsi filim. Weligaa ma sameynin filim gaaban! 'Waxaan iri, waan ogahay, laakiin waxaan sameyn doonnaa filim. "
Waxyar kadib, Townsend wuxuu eryay jiheeyaha filimka majaajillada ah ee la yiraahdo "Eddie Murphy Raw". Wuxuu la wadaagay oo uu hagayay "Shanta Qalbi Dhagax" ee 1991 wuxuuna noqday astaamaha madaw ee "The Meteor Man" ee 1993, kaas oo isaguna uu qoray, hagay, iyo soo saaray. Wuxuu abuuray isla markaana xiddig ka ahaa taxanaha telefishanka "Hoodda Waalid" oo dhawaanahan ku soo noqday xididnimadiisa superhero isaga oo ku soo bandhigay kuna soo muuqday "Hillaac Madoow".
Maahan wax ku soo beegmay in dhadhanka iyo xiisaha uu u leeyahay madaddaalada ay ku wada qaribeen khariidada.
"Waxaan ku soo koray xaafad aad u adag oo ku taal dhinaca Galbeedka Magaalada Chicago," ayay tiri Townsend. Dhinac kasta oo dariiqyada ka mid ah waxaa jira tuugo burcad ah oo na dhex ridayay musqusha. Saaxiibkeygii ugu fiicnaa wuxuu jebiyey daanka isaga oo isku dayaya inuu sii haysto xashiishkiisa 15. Waxaan daawaday TV badan, waxay iigu yeeraan hagaha TV-ga. Wax kasta oo TV-ga ah, xitaa PBS. Waan kuu sheegi karaa opera, waan kuu sheegi karaa aflaanta Faransiiska. Waxaas oo dhan waxaan ku daawaday telefishankan yar ee madow iyo caddaan oo leh badhan jaban iyo jillaab antenna "
Fasalka shanaad, dhadhamadiisa dhaqanka ee xoogga badan ayaa si dhakhso leh u soo jiidata dareenka macallimiintiisa.
"Waxaa jiray macalin cadaan ah oo doonayey in caruurta fadhiga ku fadhiya ay bartaan Shakespeare. Macallinkan ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee dhaha, "Waad noqon kartaa qof", ayuu yidhi. "Xitaa ma ogeyn waxa ay la micno tahay, noqo" qof. "Waxaan ku biiray X-Bag, Experimental Black Actors Guild, waxaanan xubin ka ahaa ugu yaraa 14 sano kahor. Markii dhalleeceeyayaasha la daabacay, way i kala garteen. Waxay yiraahdeen wiilkan yar wuxuu ahaa qof halkaan lagu daawado. "
Tani waxay u horseeday inuu wax ku barto magaalada labaad ee City, caanka ah ee loo yaqaan 'improv troupe' iyo Iskuulka Chicago, iyo inuu ku fiicnaado ficilkiisa iyo xirfadiisa ficilkiisa kahor inta uusan iskudayo nasiibkiisa Hollywood.  "Markaad fiiriso waddadayda, waxaad arkeysaa farshaxan gacmeed kaasoo garta nolosha oo aan lahayn jawaabaha oo dhan," ayaa sharxay Townsend. "Waxay u egtahay dhammaad dhintay waxay noqotaa waddo weyn oo u ekaanaysa wado weyn waxay noqoneysaa geeri dhimatay. Ogaanshaha in noloshu ay tahay mid xiiso leh, oo haddii aad ku raaxaysan karto, mar walba waad guuleysan doontaa oo aad madadaalo yeelan doontaa. "
Maaddaama ay tahay wax lagu farxo sida sheekooyinka dhabta ah ee Townsend ay u noqon karaan, wuxuu kaloo rajeynayaa inay faa'iido u lahaan doonaan jiilka xiga ee farshaxannada.
Waxaan u malaynayaa in noloshaydu tahay sheeko dhiirrigelin leh, ayuu yidhi. "Farshaxannadan oo laga yaabo inay ku dhegaan ama is-idhi naftooda," Waxaan dareemayaa inaan samayn karo, laakiin garan maayo! "- Waxaan u maleynayaa in sheekadayda ay gacan ka geysan doonto in la siiyo dhibaatadaas yar, "
Waxa qoray oo qortay Robert Townsend, oo uu soo saaray Berkeley Marsh
by: 1er ayaa kordhay
halkaas oo: Marsh Berkeley Cabaret, 2120 Allston Way, Berkeley
tigidhada: 20 illaa 35 dollars; 415-282-3055, www.themarsh.org
PHOTO. Marion Bartoli ayaa ku hawlan: l
Muusikada: Blick Bassy wuxuu ku guuleystaa Grand Prix Sacem 2019